नाचेको भिडियो खिचेर १ लाख जित्ने अबसर :: Artha Sansar News | Economic and Political News | Nepal online News
नाचेको भिडियो खिचेर १ लाख जित्ने अबसर गीत प्रबर्धनमा नयाँ प्रयोग
काटमाडौं–तपाईं नृत्यमा पारंगत हुनुहुन्छ ? आफ्नो प्रतिभा दुनियाँलाई देखाउन चाहनु हुन्छ ? फर्म भर्नु पर्दैन । अडिसन पनि दिनु पर्दैन । जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीँ नाच्नुस्, भिडियो खिच्नुस् । एक लाख रुपैयाँ जित्ने अवसर प्राप्त गर्नुहोस् ।
अष्ट्रेलिया र काठमाडौंमा रहेका बाबा एजुकेशन कन्सल्टेन्सीको प्रायोजनमा भइरहेको ‘नाईं मलाई थाहा छैन’ अन्तरराष्ट्रिय नृत्य प्रतियोगितामा देश विदेशमा छरिएर रहेका नेपालीहरुले नाचेर भिडियो पठाउन सक्नेछन् ।‘नाईं मलाई थाहा छैन’ अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य प्रतियोगिता खुला निःशुल्क प्रतियोगिता हो । गीतको प्रबर्धन गर्न आयोजकले यस्तो नयाँ तरिका अपनाएका हुन् ।
प्रतियोगितामा १ जनवरी २०१७ देखि २८ फेब्रुअरी २०१७ सम्म भिडियो पठाउन सकिने छ । प्रतियोगितामा भाग लिन गायक संजिव पराजुली र गायिका टिका प्रसाईंको आवाजमा रहेको गीत ‘नाईं मलाई थाहा छैन’ मा नाच्नु पर्नेछ । उक्त गीत गायक पराजुलीको युट्यूब च्यानलमा अपलोड गरिएको छ । यस गीतलाई लिंकबाट अडियो डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।
प्रतियोगितामा भाग लिन दुई वा दुईभन्दा बढीको समुहमा नाच्नु पर्नेछ । एकजनाले मात्र नाचेको भिडियो प्रतियोगीतामा समावेश नहुने आयोजकले जनाएको छ । भिडीयो खिच्न अत्याधुनिक क्यामेरा र भिडियोग्राफरै चाहिन्छ भन्ने छैन । भिडियो साधारण मोबाइलबाट खिच्दा पनि हुन्छ । नाचेको भिडियो कम्तिमा २ मिनेट २० सकेण्डको हुनै पर्नेछ ।
प्रतियोगिताको लागि खिचेको भिडियो गायक पराजुली अथवा गायिका प्रसाईंको फेसबुक पेजको मेसेज बक्समा पठाउन सकिने छ । अथवा NaiMalaiCompetition@gmail.com मा इमेल गर्न सकिने छ । भिडियो पठाउँदा नृत्य गर्ने व्यक्तिहरुको पूरा नाम, ठेगाना र सम्पर्क फोन नम्बरसमेत मेसेज गर्नुपर्ने छ ।
प्राप्त भिडियो प्रतियोगिताको मापदण्डअनुसार हेरेर पठाउने व्यक्तिलाई खबर गरिने आयोजकले जनाएको छ । मापदण्डअनुसारको भए भिडियोलाई गायक पराजुलीको युट्यूब च्यानल र फेसबुक पेजबाट सार्वजनिक गरिने छ ।
प्राप्त भिडियोमध्ये ख्यातिप्राप्त कोरियोग्राफर र डान्सरहरुको मुल्याङ्कन, फेसबुक पेज र युट्यूब च्यानलमा आएका लाईक, कमेन्ट र शेयरका आधारमा उत्कृष्ट नृत्यको छनौट गरिने आयोजकले जनाएको छ । उत्कृष्ट भिडियोले १ लाख नगद पुरस्कार पाउने छ ।